ဤတွင်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအာကာသယာဉ်မှူးဇူလိုင်4ကျင်းပပုံ - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ BGR - "ဒါဟာနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအာကာသယာဉ်မှူးဇူလိုင်4ကျင်းပပုံ
NASA ၏ patch တစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အလွန်တရာဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်း iPhone အာကာသယာဉ်မှူးများသည်အချိန်ကာလများစွာကြာအောင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုကိုစွန့်ခွာရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့အများစုကပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားသည့်အရာများကိုလည်းသူတို့မေ့သွားကြသည်။
NASA အာကာသယာဉ်မှူး Christina Koch နှင့် Nick Hague တို့အတွက် ISS တွင်သူတို့၏လက်ရှိတာ ၀ န်မှာမီးပန်းများမရှိဘဲဇူလိုင်လတွင်4ကိုကျင်းပရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့အားပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ကိုမရပ်တန့်စေဘဲသူတို့သည်လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်တွစ်တာမှတစ်ဆင့်အများပြည်သူအားဝေမျှခဲ့ကြသည်။ iPhone 8
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီ, အဖြူနှင့် @Space_Station အပေါ်အပြာဝတ်ဆင်!" ဟိဂ် Tweet . iPhone ရောင်းအား ကင် "ယနေ့ည" ဟုစီစဉ် "။ အမဲသား Patti, ပြောင်းဖူး, cobbler နှင့်ဘလူးဘယ်ရီလင်မနစ်မီနူးပေါ်မှာရှိသမျှများမှာ - 15 မိနစ်ထက်လျော့နည်းအတွက်အရသာနှင့်အဆင်သင့်။
ဟေ့ဂ်၏တွစ်တာတွင်သူနှင့်သူ့ NASA သိပ္ပံပညာရှင်ချင်းတို့၏အနီရောင်၊ အဖြူနှင့်အပြာဝတ်စုံနောက်ခံရှိနိုင်ငံ၏အလံနှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည်။ iPhone XS max ကို
Koch ထွက်လာတယ် အာကာသစခန်းသည်မြို့တော်ကိုဖြတ်သန်းသွားစဉ်အထက်ပါမှလျင်မြန်သောရိုက်ချက်ကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ဖီလစ်ဒဲလ်ဖီးယားသို့ညိတ်ညိတ်ဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသူနှုတ်ဆက်သည်။
ISS သည်ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သတ်သောနာရီဝက်ခွဲပတ်လုံးကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုလှည့်ပတ်နေပြီး၊ အမြင်တက်စိမ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကို။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အကွာအဝေးကြောင့်ခရီးသည်များသည်သူတို့၏ရှုထောင့်မှအကြီးမားဆုံးမီးရှူးမီးပန်းများကိုပင်တွေ့မြင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ iPhone xr
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုသိပ္ပံပညာရှင်များရုံအာကာသစခန်းဖို့နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းနှင့်၎င်းတို့၏သင်္ဘောသားသုံးယောက်အဖွဲ့ဝင်ရန်လေ့လာရေးခရီး 59 ကမ္ဘာမြေမှပြန်လာသောပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ iPhone 8 မရှိတော့။ သူတို့ကယခုအာကာသယာဉ်မှူးရဲ့နောက်လှိုင်းလုံးများ၏ရောက်ရှိစောင့်ဆိုင်းနှင့်အောက်တိုဘာလ 603သည်အထိကြာရှည်သင့်သော 2019 ရေကြောင်း, အဘို့ထိုသူတို့ join ။ အသစ်သောခရီးသွားများအတွက်အာကာသစခန်း၏အဆိုပါသုံးဇူလိုင်လ 20 အပေါ်ရောက်လာရန်စီစဉ်ထား။
အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ဦးခေါင်းတွင်ဘာဘာရိတ်တစ်ဦးကလိင်တံထိုအခါသင်တုန်း၏ '' အထဲကအလုပ်လုပ်စေပြီး ''